डिपिएलका सबैभन्दा महंगा खेलाडीले के भने? | Suvadin !
छ टिमले लगाएकाे ८४ खेलाडीकाे बाेलीमा ४ खेलाडीहरू सर्वाधिक महंगाे सूचीमा रहे। राष्ट्रिय टिमका सदस्यहरू साेमपाल कामी, सागर पुन, मेहबुव अालम र करण केसी डिपिएल अक्सनका सर्वाधिक रकम पाउने खेलाडी हुन्। उनीहरूलार्इ जनही एक लाखमा विभिन्न टिमहरूले खरिद गरे। जुन रकम टिममा कप्तानबाहेक अन्य खेलाडीकाे सर्वाधिक रकम हाे। अाफूहरू सर्वाधिक महंगाे खेलाडी भएपछि उनीहरूकाे प्रतिक्रिया हामीले बुझेका छाैं।
Jan 08, 2017 14:03
डिपिएल अक्सनमा सर्वाधिक रकममा टिममा अनुबन्ध भएका खेलाडीहरू।
Shared: 255 times | Share this on
बहुचर्चित धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) काे अक्सन शनिवार राजधानीमा सम्पन्न भइसकेकाे छ। डिपिएल खेल्न याेग्य रहेका २ सय १७ खेलाडीहरूमध्ये ९० जना खेलाडीहरूलार्इ अक्सनमा राखी मूल्य बढाबढ गरिएकाे थियाे। अक्सनमा सबैकाे चासाेका विषय कुन खेलाडी सबैभन्दा महंगाेमा, कुन टिमले खरिद गर्ला भन्ने थियाे। अक्सनका समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा क्रिकेटका फ्यानहरूमा गर्मागर्मीकाे विषय पनि थियाे याे।
साेमपाल कामी, काठमाडाैं गाेल्डन्स
नेपालमै पहिलाेपटक राष्ट्रिय खेलाडीहरूकाे अक्सन गरि डिपिएलमा खेलाडीहरू सहभागी गराउने सह्रानीय कार्य भएकाे छ। सर्वप्रथम त म अायाेजकहरूलार्इ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अक्सनमा सबैभन्दा महंगाे खेलाडीहरूमध्ये एक बन्न पाउँदा निकै खुसी छु। हुन त राष्ट्रिय खेलाडीहरू सबैले निकै मेहनत गर्ने गर्दछन् तर पनि अक्सनजस्ता कार्यक्रमले हामीलार्इ अाफ्नाे भ्यालु थाहा पाउन मद्दत पुग्छ। म अाफू राम्राे गरिरहेकाे छु भन्ने कुरा अक्सनमा बढी रकमकाे भाउ लाग्नुले पनि बताउँछ। यसले हामीलार्इ हाैसला थप्छ नै, साथसाथै अक्सनबाट टिममा पर्न असफल खेलाडीहरूलार्इ अझ मेहनत गर्न यसले प्रेरित गर्छजस्ताे लाग्छ।
काठमाडाैं गाेल्डन्सले मलार्इ लिएकाे छ। हाम्राे टिम ब्यालेन्स बनेकाे छ। हामीसँग देशभरिकै खेलाडीहरू छन्। धनगढीका पनि खेलाडीहरू छन्। त्यसले गर्दा धनगढीकाे सर्पाेट पनि हामीले पाउने विश्वास गरेका छाैं। धनगढीमा भएकाे एसपिए कप २०१५ काे उपाधि पनि हाम्राे टिमले उचालेकाे हुनाले पनि म धनगढीका दर्शकहरू माझ परिचित छु। धनगढीले नयाँ स्वरूपकाे क्रिकेट सुरू गर्न लागेकाे छ। त्यसकाे सफलताकाे शुभकामना दिन चाहन्छु।
मेहबुब अालम, सिवाइसी अत्तरिया
सिवाइसी अत्तरियाबाट मैले धनगढी क्रिकेट लिग(डिसिएल) भाग ३ खेलेकाे थिएँ। त्यतिबेला हामी उपबिजेतामा सीमित भएका थियाैं। मैले अाफैं पनि सिवाइसी अत्तरियमा पराै भनेर चाहेकाे थिएँ। डिसिएलमा अत्तरिया बसाइका दाैरान सिवाइसीका व्यवस्थापकहरूसँग एकदमै निकटकाे सम्बन्ध भएकाे थियाे। त्यही भएर नि महंगाे खेलाडीका रूपमा फेरि सिवासी अत्तरियामा प्रवेश गर्न पाउँदा निकै खुसी छु।
हाम्राे टिम निकै ब्यालेन्स बनेकाे छ। ज्ञानेन्द्र मल्लले नेतृत्व गर्ने हाम्राे टिममा मुख्यत: ठूला अलराउण्डरहरू छन्, प्रदीप एेरी, करण केसी अनि म अाफैं पनि अलराउण्डरकाे रूपमा छु। त्यस्तै टिमले युवा खेलाडीहरूलार्इ पनि टिममा राम्राे अवसर दिएकाे छ। सन्दीप सुनार, दिलीप नाथ, अविनाश बाेहराजस्ता उदयमान खेलाडीहरू टिमका मेरूदण्ड हुन्। डिपिएल अाउन अझै केही महिना बाँकी छ तर हामीलार्इ डिपिएलकाे हुने समयकाे व्यग्र प्रतीक्षा छ।
करण केसी, सिवाइसी अत्तरिया
अक्सनमा सबैभन्दा महंगाे खेलाडी बन्छु भनेर अाफूलार्इ लागेकै थिएन, किनकि अाफूभन्दा पनि सिनियर खेलाडीहरूकाे बाेली लाग्दै थियाे। अक्सनमा सबैभन्दा महंगाे खेलाडीका रूपमा सिवाइसी अत्तरियाले अाफ्नाे टिममा अनुबन्ध गरेकाे कुरा मेहबुब दाइले सुनाए। त्याे खबरले निकै खुसी बनायाे।
धनगढी प्रिमियर लिगकाे अायाेजकले गरेकाे अक्सन निकै सराहनीय छ। यसले एकातिर हाम्राे घरेलु क्रिकेटकाे विकासमा महत्वपूर्ण याेगदान पुर्याउँछ। अर्कातिर बढीभन्दा बढी खेलाडीलार्इ म्याच एक्साेजर दिन्छ। यस्ता प्रतियाेगिताहरू देशभरि नै हुनुपर्छ अनिमात्र नेपालले छिट्टै अर्काे विश्वकप खेल्नेछ।